Sidee Looga Soo Degaa Dhammaan Sawirrada Telegram? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loogala soo degaa dhammaan sawirrada Telegram?
Waxaa laga yaabaa 6, 2021 0 comments 407
Miyaa laguu soo diray dhowr sawir oo Telegram ah oo aad rabto inaad dhammaantood soo wada dejiso waqti isku mid ah? Codsigu wuxuu ku darayaa xulasho xiiso leh oo u oggolaanaysa isticmaaleyaasheeda inay si otomaatig ah u soo dejistaan ​​faylasha ay ka helaan barxadda dhexdeeda
Daar faylka si otomaatig ah loo soo dejiyo waxay iska ilaalinaysaa inaad ku xulato sawir sawir si aad u soo dejiso qalabkayaga. Hadda dalabku wuxuu daryeeli doonaa hawsha oo dhan. Isla marka aan helno feyl, Telegram ayaa soo dejinaya waxaanan ku heli doonnaa moobiilka.
Ku kici ikhtiyaarka "kaydso galabta"
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso si aad ugu soo dejiso sawirrada Telegram waa dhaqaajiso ikhtiyaarka "kaydso galabta". Sidan ayaad fursad ugu heli doontaa inaad ku keydiso sawirkaaga dhammaan sawirrada aad ka hesho xiriiradaada ku jira arjiga. Kicinta doorashadan waa mid aad u fudud:
Furan codsiga Telegram ee mobilkaaga ah
Samee dhagsii saddexda xariijimo ee jiifka ah ee ku yaal geeska bidix ee kore ee shaashadda.
Xulo xulashada "XARUNTA"
Guji xulashada "JOOJINTA CHAT"
Waxaad ka heli doontaa dhowr fursadood shaashadda. Xaaladdan oo kale waa inaad raadisaa ikhtiyaarka "QAYBTA DIIWAANKA " oo dhaqaajiso.
Sida si toos ah loogu soo degsado sawirrada Telegram
Codsiga Telegram wuxuu u oggolaanayaa ikhtiyaarka inuu dhaqaajiyo soo degsashada otomatiga ah. Sidan oo kale, dhammaan faylasha, tusaale ahaan sawirrada, ee xiriiradayagu noo soo diraan si otomaatig ah ayaa loogu soo dejinayaa barxadda.
Isticmaalayaasha hadda waxay leeyihiin awood ay ku u dejiso ikhtiyaarka soo dejinta faylka sida aad doorbideyso. Waxay dooran karaan haddii ay rabaan Telegram inay si otomaatig ah u soo dejistaan, laakiin kaliya WIFI ama sidoo kale xogta moobiilka. Halkan waxaan ku sharaxeynaa habka ugu fudud ee loo qaabeyn karo doorashadan:
Furan dalabka ku jira qalabkaaga moobaylka
Samee dhagsii saddexda xariijimo ee jiifka ah ka muuqda bidixda kore ee shaashadda
Liiska xulashooyinka waa inaad ku doorataa "XARUNTA".
Hadda hel qaybta "Xogta iyo keydinta”Halkaasna ku riix
Waxaad ka heli doontaa qayb "Toos udajiso multimedia”. Waa inaad doorataa duruufaha aad rabto in faylasha la soo dejiyo.
Hadda uma baahnid inaad wax uun soo dejiso gabi ahaanba. Isla marka aad hesho fayl cusub, dalabka ayaa si otomaatig ah ugu soo dejisan doona cinwaanka taleefankaaga.
Sidoo kale waxaad fursad u leedahay inaad awood u siiya ama joojiya ikhtiyaarka soo dejinta otomaatiga ah. Si aad u joojiso, kaliya waa inaad ku celcelisaa isla talaabooyinka kor lagu sharaxay oo uncheck sanduuqa.
Kaydi sawirrada gallery
Haddii aad heshay sawir aadna rabto inaad ku hayso taleefankaaga gacanta kaliya waa inaad ku kaydisaa sawirka. Si aad sidaas u sameyso, raac talaabooyinkan fudud ee aan hoos ku sharaxeyno.
Furan dalabka mobilka
Ka hel wadahadalka meesha aad ka heshay faylka aad rabto inaad ku kaydiso shaashadda taleefankaaga gacanta.
Xulo feylka, kiiskan sawirka, oo aad rabto inaad keydiso.
Guji sawirka kadibna dhagsii saddexda dhibcood ee taagan ee ka muuqda geeska kore ee shaashadda.
Xullo "Ku soo dejiso sawirka"
Sawirka waa lasoo dajiyay oo lagu kaydiyaa gallery-gaaga.
1 Ku kici ikhtiyaarka "kaydso galabta"
2 Sida si toos ah loogu soo degsado sawirrada Telegram
3 Kaydi sawirrada gallery
Waxaa laga yaabaa 6, 2021
Waxaan rabaa in aan ogaado sida loo noqdo streamer on Twitch.
Sidee looga qarin karaa fiidiyowga macaamiishaada?